I-Professional Led Lighting Fiution Solution & Umhlinzeki Wokukhanya Kwesitaladi Esiholwa | Isibani se-CHZ
Umhlinzeki Wempahla Yesixazululo Sokukhanya Kwe-LED - I-CHZ Lighting
500W-1200W IP66 / lk1010KV KUQINISEKISIWE
Isixazululo sokusebenza okuphezulu sokukhanya kwenkundla / kwesakhiwo
I-CHZ inikeza iphothifoliyo ehlukahlukene yezixazululo zokukhanyisa izibani ze-LED ezinakekela izinhlelo zokusebenza nezindawo eziningana, kufaka phakathi amahhovisi ezentengiselwano, izimboni, izimayini, imigwaqo, izakhiwo, njll.
Ukukhanyiswa komgwaqo CHZ-ST20 flat smd kuholele ukukhanya komgwaqo ngentengo eshibhile
Ukukhanyiswa komgwaqo CHZ-ST20 flat smd kuholele ukukhanya komgwaqo ngentengo eshibhile + https: //chz-lighting.com
izibani eziholwa phambili zomgwaqo ezihamba phambili ngokuhanjiswa okuqondile kwefekthri yokunyusa
izibani zomgwaqo eziholwa phezulu ezihamba phambili ngokuhanjiswa okuqondile kwefekthri yokuphakanyiswa https://www.chz-lighting.com/street-lighting
I-ENEC igunyaze ukuthi kube nokuthengiswa okuphelele kwesibani sikagesi
I-ENEC igunyaze ukuthi kube nokuthengiswa okuphelele kwesibani sikagesi ku-https: //www.chz-lighting.com/tube-lighting
I-CHZ iholele ekutholakaleni kwe-fluorescent tube ezindaweni zokupaka ngaphansi komhlaba
I-CHZ iholele ekutholakaleni kwe-fluorescent tube ezindaweni zokupaka ngaphansi komhlaba https://www.chz-lighting.com/tube-lighting
Sisiza amakhasimende ukuthi akhethe imikhiqizo efanelekile futhi anikeze izisekeli zobuchwepheshe ezihambisanayo ngemuva kokuqonda izidingo zawo jikelele. Amakhasimende adinga kuphela ukusinikeza ngolwazi oluyisisekelo lobunjiniyela. (Thatha ukukhanyisa komgwaqo njengesibonelo, imininingwane amakhasimende adinga ukukunikeza ifaka phakathi ububanzi bomgwaqo, ukuphakama kwepali, ukuma kwepali, isikhala sepali, imfuneko yokukhanya okujwayelekile, njll.) Ngokuya ngolwazi olunikeziwe, abaklami bethu bangasebenzisa iDialux ukulingisa imiphumela nikeza izinketho eziningi zokuklama kumakhasimende.
IShanghai CHZ Lighting yenza ukukhiqizwa okulinganiselwe futhi yenza ukulawula okuqinile kwekhwalithi ukuqinisekisa ikhwalithi engcono yamalambu e-LED, yokonga isikhathi nezindleko zawo womabili amaqembu nokuletha izinzuzo ezinkulu kumakhasimende.
IShanghai CHZ Lighting Co., Ltd., eyasungulwa ngonyaka ka-2010, iyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elenza ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo yokukhanyisa.
I-CHZ ithobela izinga “lobuchwepheshe obuholayo nekhwalithi eholayo” futhi isungule i-R ehlangene& D maphakathi noDkt Chen Dahua, uSolwazi eMnyangweni Wezinto Zokukhanya Zikagesi zeFudan University. Siqhubeka ngokuthuthukisa imikhiqizo emisha futhi sishayela ubuhlakani bohlelo lokukhanyisa. Iphothifoliyo yethu yomkhiqizo ifaka ukukhanya kwangaphakathi, ukukhanyisa kwezimboni, ukukhanyisa kwensimu, ukukhanyisa kwezemidlalo, ukukhanyisa emgwaqweni, nokukhanya kwelanga. Siphikelela ekusebenziseni izinto ezisezingeni eliphakeme namasu wokukhiqiza athuthukile ukwenza izibani zethu ngamunye ziphumelele ezinye.
Uma unemibuzo mayelana nezibani noma izinsiza zethu zokukhanyisa i-LED, sicela ukhululeke ukuxhumana nethimba lethu lenkonzo yamakhasimende.